१० अर्ब खर्चको एक–एक हिसाब चाहिन्छ : गगन थापा – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/१० अर्ब खर्चको एक–एक हिसाब चाहिन्छ : गगन थापा
१० अर्ब खर्चको एक–एक हिसाब चाहिन्छ : गगन थापा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका भएका सम्पूर्ण खर्चको सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद गगन थापाले कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको भनिएको १० अर्ब खर्चको एक–एक हिसाब सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । उनले दम्भ र भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारले जनता र मुलुकलाई कोरोना मुक्त बनाउन नसक्ने दाबी गरे ।उनले भने, “यो सरकारले कोरोनाको लडाइँबाट हामीलाई पार लगाउन सक्क्तैन । अब हामी सहयोग गर्छौं भनेर मात्रै बस्दैनौं । अब हामी प्रश्‍न गर्छौं । उत्तर चाहन्छौं र सरकारलाई जवाफदेही बनाएर छाड्छौं । हामीलाई अब उत्तर चाहिन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय । १० अर्ब रुपैयाँ खर्च कहाँ भयो ? हामीलाई यसको उत्तर चाहिन्छ । यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो र्निलज्जताको पराकाष्ट हो । ”
प्रतिनिधिसभामा आफूहरुले माघदेखि नै कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन अपनाउनुपर्ने सर्तकताकाबारे आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले नसुनेको भन्दै आक्रोश पोखे ।उनले भने, “न हाम्रो सुन्यो, न अदालतको सुन्यो, न प्रेसको सुन्यो, न नागरिकको सुन्यो । कसैको सुनेन । नसुन्दै गर्दा नियन्त्रणमै रहेर पनि आज हाम्रो अवस्था यस्तो भएको छ । यसको दोष कस्को ? के कानुनले गर्दा रोकेको हो ? के ढुकुटीमा पैसा नभएर रोकिएको हो ? के कांग्रेसले रोकेको हो ? कि अदालतले रोकेको हो ? कसले रोकेको हो ? यो रोकेको केबल सबै कुरा म जान्दछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अंहकारले रोकेको हो । सरकारको अकर्मण्यताले रोकेको हो । सरकारको अक्षमताको कारणले गर्दा आज हामीले यो अवस्था व्यहोर्नु परेको छ । ”
उनले क्‍वारेन्टिनको व्यवस्थापन राम्रो हुन नसकेको को आपत्ती जनाउँदै प्रश्‍न गरे“यो क्‍वारेन्टिन हो कि मान्छे मार्ने क्याम्प हो ? हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ । ”
उनले कोरोनबाट मृत्यु भएकाको तथ्यांक संकलन तथा सो क्रममा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाउनु परेकाको सरकारले सम्बोधन नगरेकोमा आक्रोश पोखे ।उनले भने, “नेपाल भन्दा बाहिर १२७ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दछ नेपाल भित्र १४ जनाको मृत्यु भएको छ । ३७ सय ६२ जना संक्रमित भएका छन् । तर, के मृत्यु हुनेको संख्या १४ मात्रै हो ? त्यसो भए भोकबाट मारिएका सूर्यबहादुर तामाङ र झुण्डिएर मरेका चन्द्रबहादुर परियार र औषधि खान नपाएर मरेकी कंकादेवी बोहरा वा सुत्केरी भएर अस्पताल लान नपाएर मरेकी लालकुमारी रोकायको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ । क्‍वारेन्टिनमा मृत्यु भएकी सुनिता लोहारको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ ? वा झुण्डिएर मर्न बाध्य भएका लीलाबल्लभ र आत्मदाह गर्न बाध्य भएका सिद्धार्थ आउजीको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ ? ”
अदालत, संसद्, विज्ञ सबैले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन भने पनि सरकारले बेवास्ता गरेको, सुदूर पश्चिममा स्वाब संकलन रोकिएको , प्रदेश २ मा परीक्षणको रिपोर्ट आउन ढिलाइ भइरहँदा सरकारले क्‍वारेन्टिनमा बसेका र मरेका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्ने मापदण्ड बनाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।“अव क्‍वारेन्टिनम बसेको मान्छेको परीक्षण नगर्ने रे । बरु सरकारले यसो गरे हुन्छ । टेस्ट गर्न बन्द गरिदिने अनि नेपाललाई कोरोना फ्रि देश भन्दिने । किन कि परीक्षण नभएपछि संक्रमण एक जनाको पनि देखिन्न । जवाफ चाहियो ? जिम्मा कसले लिने हो ? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको हो यसो गर्नलाई ? स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नुभएको हो ? एक जना दुई जना निर्दोष कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दोषबाट र अपराधबाट भाग्‍न पाइन्न । ”
विज्ञहरुसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडीटी परीक्षण काम लाग्दैन भन्दा भन्दै सरकारले आरडीटी परीक्षणलाई जारी राखेकोमा पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।सांसद थापाले भने, “न यो विश्वसनीय छ ? न नेपालको संक्रमणको अवस्थामा यसको औचित्य छ । तर जबरजस्ती आरडीटी परीक्षण गर्ने यो अपराधको जिम्मा कसले लिन्छ ? हामीलाई जवाफ चाहिन्छ । मृत्यु भइसकेका मान्छेको स्वाव परीक्षण नगर्ने कसले भन्यो हामीलाई जवाफ चाहिन्छ । ”